November 26, 2020 Xuseen 0
Tababaraha xulka kubadda cagta ee Puntland Ibraahim Cabdi Cali ayaa ku dhawaaqay xulka ka qayb-gaali doona tartanka Dowlada goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhowaan lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Xulka kubadda cagta ee Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la sugayey ayaa waxa ay ka kooban yihiin 22 ciyaar yahan oo ka soo kala jeeda gobolo iyo kooxo kala duwan, waxaana 14 kamid ah ay yihiin kuwa ku cusub ka qaybgalka koobkaan.
Macalinka ayaa xulka ku soo daray qaar kamid ah xidigihii matalayey xulalka gobolada Badhan, Buuhoodle, Xaysimo iyo Sool oo ka qaybgalay koobkii gobolada Somaliland ee dhowaan lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Gool-hayihii Puntland u qaaday koobkii ugu horreeyey, goal dhaliye Yacquub Cismaan iyo laacibka ku guulaystay goal dhalinta koobkii Somaliland Bashiir Bashka ayaa inya ka soo muuqan doona koobka sanadkaan, waxaana macalinka cusub oo kamid ahaa tababarayaasha kooxaha Qardho lagu ammaanay hanaanka uu kooxda u soo xulay.
Xulka difaacanaya koobka ee Jubbaland ayaa bilihii ugu dambeeyey ku jirey diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii ay markale koobka u geyn lahaayeen magaalada Kismaayo oo xarun kumeel gaar ah ugu magacaaban maamulkaasi.